Diblomaasiyiinta Sweden oo aan tegi karin carriga Qaasa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Annika Söder, agaasimmaha guud guud/isku-duwaha wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden. Sawirle: Henrik Montgomery / TT
Diblomaasiyiinta Sweden oo aan tegi karin carriga Qaasa
La daabacay torsdag 17 mars 2016 kl 15.00
Markii ugu horreeysay ee wixii ka dambeeyay kolkii uu hoggaanka dalka Sweden ictiraafay maamulka Falastiin uu booqasho heer sare ah maamulka Falastiin ka helay Sweden.
Carrigaasina oo ay booqasho ku tagtay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden Annika Söder. Booqashada ayay sidoo kale ka muuqatay xiriirka xumaaday ee labada waddan ee Israa’iil iyo Sweden, maadaama aanay Söder u suurtagelin inay la kulantoo dhiggeeda ee dalkaasi Israa’iil. Inkasta oo dawladda Israa’iil ay middaa ku macneeysay ciriiriga wakhtiga inay ugu wacan tahay.
Dhanka Sweden ayaa looga arkaa in fal-celinta adag ee dalka Israa’iil uu ka bixiyay ictiraafkii uu dalkani u fidiyay maamulka Falastiin uu salka ku hayo sidii looga cabsi gelin lahaa waddammada kale ee EU iney raacaan dhabbaadii Sweden ee aqoonsiga Falastiin, Hase yeeshee ay Annika Söder sheegtay in xiriirka Israa’iil uu yahay mid muhiimad ku fadhiya.
- Xiriirka Israa’iil waa mid aad muhiimad ugu fadhiya. Waxaan sidoo kale ogsooneyn kolkii aan Falastiin ictiraafeeyneyba in aannu maamulka Israa’iil ku farxi doonin, eyna dhaleecooyin ka iman lahaayeen. Hase yeeshee midda eynaan aqbali karin waxay tahay kolka aannu been maqalno ama xumaan la iska sheego.
Intaa waxaa dheer in aqoonsiga uu dalkani siiyay maamulka Falastiin uu sabab u noqday in aaney diblamaasiyiinta iswiidhishku booqasho ku tegi karin carriga Qaasa. Waana dhibaato ballaaran oo aan muddo sii socon karin, sida ay sheegtay Annika Söder.
- Waxaannu iminka si wada-jir ah uga wada shaqeeynaa ururro kale ee mucaawineed, sidii ey uga war-qabi lahaayeen dhaqaalaha taageerada ee aannu Falastiin gelinno halka uu ku baxo iyo sida uu shaqeeyo. Hase yeeshee maahan xaalad muddo sii socon karta, balse aan mustaqbalka dhow siyaabo kale ula soconno howlaha aannu Qaasa ka qabanno, Annika Söder, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden.